YouTube ဗီဒီယို Thumbnail ပုံရိပ် Download - အများဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုထောကျပံ့
YouTube ဗီဒီယို Thumbnail ပုံရိပ် Download
❤ မည်သည့် YouTube ကိုဗီဒီယိုအပေါငျးတို့သ thumbnail ကိုပုံရိပ်များကဤရိုးရှင်းသော tool ကိုအတူ download လုပ်ပါ။
မည်သည့် YouTube ကိုဗီဒီယို၏ဗီဒီယိုကို thumbnail ကိုရဖို့အောက်ကစာသားထဲသို့ဗီဒီယိုပုံမှန် URL ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
⚠ သင့်ရဲ့ URL ကိုဤကဲ့သို့သောကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်:
YouTube ကို Thumbnail Get
ဤ site ကိုသင်ဗီဒီယို URL ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်မည်သည့် YouTube ဗီဒီယို၏ပုံငယ်များဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။
⚠ bookmark button ကိုဗားရှင်းသစ်ရှိပါတယ်။ ယခုဒိတ်လုပ်ပါ။
⚠ တချို့ကလူမှုကွန်ယက်သင်လက်ရှိမှန်ကန်သော thumbnail ကိုရဖို့ကြည့်ရှုနေသောစာမျက်နှာကိုပြန်ဖွင့ရန်လိုအပ်သည်။
♳ ဆာဗာ 1
♴ ဆာဗာ 2
♵ ဆာဗာ 3
☀ thumbnail Grabber ကနေပုံငယ်များဒေါင်းလုပ်ထောက်ခံပါသည် Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, DailyMotion, Vimeo, Tumblr, Imgur, Liveleak, TED, Mashable, 9gag, Break, Soundcloud, Flickr, ESPN, IMDB, Buzzfeed, Okru, Metacafe, WorldStarHipHop နှင့်ပိုပြီး. ☁
အဘယ်ကြောင့်ဒီအကြော့ tool ကိုရှေးခယျြ?
အတော်များများကအပိုဆောင်း tools များ
❝ရုပ်ပုံစာရင်းကိုသာသင့်ရဲ့ device အတွက်သိမ်းဆည်း❞
♻ Clear ကိုသမိုင်း
ကောင်းသောစိတ်ကူးများကိုရှာဖွေရန်အကြံပေးချက်များ button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ပိုကောင်းအဆင်ပြေဘို့, Bookmark ကျွန်တော်တို့ကို!
Mac OS X ကိုသုံးပြီး အကယ်.
Youtube ကိုပိုစတာ Extract
Thumbnail get 2.0 ← သင့်စာညှပ်များဘားမှဒီဆွဲပါ
စာညှပ်ဘားမမြင်ရပါသလား စာနယ်ဇင်းများ Shift+Ctrl+B
Mac OS X ကိုသုံးပြီး အကယ်., စာနယ်ဇင်းများ Shift+⌘+B
သို့မဟုတ်, စာသားအကွက်အောက်ရှိအားလုံးကုဒ်ထို့နောက်သင့်စာညှပ်များဘားက paste ကူးယူပါ။
❝ဤသည် script ကိုဘယ် website မဆိုမှဗီဒီယိုပိုစတာ extract နိုင်ပါတယ်။❞
YouTube ကို Thumbnail ပုံရိပ် Generator ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
လှမ်း 1 : YouTube URL ကိုရိုက်ထည့်ပါ
ထောက်ပံ့လယ်ပြင်၌ရှိသော YouTube ဗီဒီယိုအတွက် URL ကိုကော်ပီကူးခြင်းနှင့် Paste ။
လှမ်း2: ကလစ်နှိပ်ပါ ❝YouTube ကို Thumbnail Get❞
ကို Preview ရန်နှင့် YouTube ကို thumbnail ကို image ကို Download လုပ်ပါ, အလိမ္မော်ရောင်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
လှမ်း3: YouTube ဗီဒီယို Thumbnail ပုံရိပ် Get
မျိုးစုံပုံရိပ်အရည်အသွေးနှင့်အရွယ်အစားတွင် YouTube ကနေ thumbnail ကို image ကို Download လုပ်ပါ
အခမဲ့ YouTube ကို Thumbnail Downloader
သငျသညျဗီဒီယို URL ကို paste လုပ်လိုက်ပါပြီးနောက် Submit button ကို click ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသော thumbnail ကိုရုပ်ပုံများကိုတစ်ဦး preview ကိုပေးအပ်သည်။ သင်ကပုံသေးအရွယ်အစားကိုစစ်ဆေးသင့်ရဲ့ device ပေါ်တွင် YouTube Videos အများ၏သက်ဆိုင်ရာ Thumbnails ကယ်ဖို့ဒေါင်းလုပ် button ကို click နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး Image Size Pick
သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနှုန်းအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားတွင် YouTube ဗီဒီယို Thumbnail ပုံရိပ်ရယူပါ။ သငျသညျ 'Extract button ကို click နိုင်ပါတယ်အခါ, မျိုးစုံအရွယ်အစား preview ကို thumbnail ကို image ကိုပေးအပ်သည်။ သင်, 480x360, 120x90, 320x180 အကြား thumbnail ကိုအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ 1280x720 နဲ့ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
YouTube ကို Thumbnail ပုံရိပ် Extractor ကိုသင် preview နဲ့ HD ကိုတွင် YouTube ဗီဒီယိုမှ thumbnail ကိုရုပ်ပုံများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါစေကြောင်းအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကို Windows ကိရိယာ Linux ကို OS က, Mac ကိုစက်, Android သို့မဟုတ် iPhone ကိုကဲ့သို့သင်၏အကြိုက်ဆုံးပလက်ဖောင်းမဆိုအပေါ် YouTube ကနေ Thumbnail ပုံရိပ် Get နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ YouTube ကို Thumbnail ပုံရိပ်ကယ်ဖို့လုံးဝအခမဲ့အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံ link ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်မိနစ်တွင် YouTube ဗီဒီယို၏ Thumbnail ပုံရိပ် Get ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းမည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမှအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမဆိုပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ်ကိရိယာမှဝင်ရောက်လုံးဝကို browser-based application ကိုနှင့်လုပ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်သင့်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ Find - ညျ YouTube Video Thumbnails Download လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဝဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ဦး thumbnail ကိုပုံရိပ်တွေထဲကရည်ရွယ်ချက် bandwidth ကိုလျှော့ချရန်နှင့်အချိန်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ကြောင့် thumbnails ထွက်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းအတွက်မူရင်းပုံ၏သီးခြားသေးငယ်မိတ္တူ, အဖြစ်ကို web စာမျက်နှာများပေါ်တွင်အကောင်အထည်ဖော်နေကြပါတယ်။
တချို့ကရှိသော web designer က HTML သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူရဲ့ browser ကိုပုံကျုံ့ထက်ပုံရိပ်တစ်ခုသေးငယ်မိတ္တူကိုအသုံးပြုဖို့စေသည် client-side scripting နည်းဖြင့်ပုံငယ်များထုတ်လုပ်ပေးသည်။
+ ငါ high resolution ကတော့၌ငါ့ဗီဒီယိုမှအားလုံးညျ YouTube Video Thumbnails extract နိုင်သလား?
ဟုတ်ပါတယ်, သင်အလွယ်တကူဒီ Downloader ကိုဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. သင်၏ YouTube ဗီဒီယို၌ရှိသမျှသောပုံစံငယ်များ extract နှင့်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
ရိုးရှင်းစွာအ YouTube ဗီဒီယိုမှ thumbnail ကို image ကိုရရှိရန်အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာ:
YouTube ဗီဒီယို Thumbnail Downloader ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုဖွင့်။
YouTube.com သွားရောက်လည်ပတ်နှင့်သင့်ညျ YouTube Video Link ကိုကူးပါ
YouTube အဗီဒီယို Link ကို Enter သေတ္တာထဲမှာ paste ။
လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုအားလုံးပုံငယ်များဖမ်းပြီးမှ Extract ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ဗီဒီယို Thumbnail Downloader လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုကနေအားလုံးထုတ်ယူ YouTube ကို Thumbnails ပြပေးလိမ့်မယ်။
သင်အလွယ်တကူ Preview ကိုအားလုံး Thumnail ပုံရိပ်တွေနိုင်နှင့် Pixels မှာသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားစစ်ဆေးပါ။
သငျသညျ Download ဖို့လိုအပျလြှငျ, သငျသညျမြားကိုလညျးသကျဆိုငျရာညျ YouTube Video Thumbnails ဒေါင်းလုပ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ဗွီဒီယို Thumbnails extracting ခံစားပါ။
သင့် YouTube ဗီဒီယို Thumbnail ပုံရိပ်တွေကယ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ခြေလှမ်းများအထက်တွင်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
+ တစ်ဦး YouTube ကို thumbnail ကိုအဘယျသို့အရွယ်အစားရှိသနည်း
youtube video ပုံငယ်များလေးကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးတွေနဲ့ရှုထောင့်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်: SD 640 x 480, MQ 320 x 180, HQ 480 x 360, HD 1920 x 1080.
သင်တစ်ဦးစံပုံစံကနေယူကျု့ဗီဒီယိုကိုမဆိုအရွယ်အစား thumbnail ကို image ကိုရယူနိုငျပါသညျ။ သင်ရုံဗီဒီယို URL ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်တစ်မူထူးခြားတဲ့ဗီဒီယို ID, လိုအပ်ပါတယ်။
Thumbnail ပုံရိပ် Format ကို: http://img.YouTube.com/vi/video_id/FILE_NAME.jpg
သင်ချင်တယ် thumbnail ကို၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်. ဖိုင်အမည်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအသုံးအများဆုံးအချို့သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြတယ်:
http://img.YouTube.com/vi/video_id/0.jpg – အပြည့်အဝအရွယ်အစား
http://img.YouTube.com/vi/video_id/default.jpg – အပြည့်အဝအရွယ်အစား
http://img.YouTube.com/vi/video_id/mqdefault.jpg – အလတ်စားပုံမှန်
http://img.YouTube.com/vi/video_id/maxresdefault.jpg – မြင့်မားသောဆုံးဖြတ်ချက်
http://img.YouTube.com/vi/video_id/1.jpg – သေးငယ်သော
http://img.YouTube.com/vi/video_id/2.jpg – သေးငယ်သော
http://img.YouTube.com/vi/video_id/3.jpg – သေးငယ်သော
+ YouTube ကို Thumbnail Grabber သို့မဟုတ် Generator ကို၏ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ?
ဒီ YouTube ကို Thumbnail သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကသင်သည်မည်သည့်ဗီဒီယိုမှမဆိုအရွယ်အစားတွင် YouTube ဗီဒီယို Thumbnail ပုံရိပ်ပုံရိပ်တွေကို download လုပ်ပါ & Get နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ပုံများ, blogging ဒီဇိုင်း, ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေနဲ့ဝေမျှကဲ့သို့နောက်ထပ်အလုပ်အတွက်တကယ်အထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။
+ ထုံးစံကဗီဒီယို splash screen ကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ်ဖန်တီးရန်အရွယ်အစားရွေးချယ်စရာအဘယ်အရာကိုအားလုံးရှိပါသလဲ
splash screen ချွေနေချိန်တွင်ဤ YouTube Thumbnail ပုံရိပ် Extractor လေးကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား options များထောက်ပံ့ပေး:
+ YouTube အ thumbnail ကိုအရွယ်အစား 2019 ကဘာလဲ?
ရုပ်ပုံ embedded ကစားသမားအတွက် preview ကိုပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ်လည်းအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်အဖြစ် Youtube ကိုထုံးစံ thumbnail ကိုပုံရိပ်, တတ်နိုင်သမျှကြီးမားသောဖြစ်သင့်သည်။ Youtube ကိုသင့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ပုံစံငယ်များအကြံပြု: (640 pixels ကို၏နိမ့်ဆုံးအကျယ်နှင့်အတူ) 1280x720 ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။
သင်တစ်ဦးပုံရိပ်ဖမ်းယူချင်ရှိရာအမှတ်မှာဗီဒီယို Pause, image ကိုရဖို့ Print Screen သို့မဟုတ်ကိုက် Tool ကိုအသုံးပြုပါ။
+ သင်ဘယ်လို YouTube ပေါ်က thumbnail ကိုပုံရိပ်ကိုရှာရမလဲ?
ပုံငယ်များ၏အားလုံးအရွယ်အစားရရှိရန်အထက် textbox သို့သင့်ရဲ့ Youtube ကို url ကို paste ။
+ YouTube ကိုအတွက်အဖုံးဓာတ်ပုံကို၏အရွယ်အစားကဘာလဲ?
YouTube ကိုဖုံးဓာတ်ပုံ / Channel ကိုအနုပညာ: 2560 x 1440 pixels.
YouTube ကိုတုံ့ပြန်မှုကို web design ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းအနုပညာလက်ရာများစကေးပါလိမ့်မယ်။ YouTube ကို 2MB ဦးရေအများဆုံးဖိုင်အရွယ်အစားနှင့်အတူ 2560 က x 1440 pixels ကိုမှာအပ်လုဒ်တင်ချန်နယ်အနုပညာအကြံပြုသည်။
+ အဘယ်သို့ငါတစ် YouTube ကို thumbnail ကိုများအတွက် embed code ကိုရပါသလဲ?
တိကျတဲ့ကဗီဒီယိုအဘို့သင့် YouTube ကို thumbnail ကိုရုပ်ပုံများကို retrieve ဖို့ရန်အလွန်လွယ်ကူသောရှိပါသည်။
ကိုယ့်ကိုအောက်ပါ URL ကိုသွားပါ: http://i1.ytimg.com/vi/Your-video-id/hqdefault.jpg
အခုတော့သင်ကဗီဒီယို Url ကိုထံမှသို့မဟုတ်ယူကျု့ဗီဒီယို၏ embed ကုဒ်ကနေဖြစ်စေ၏ဗီဒီယိုအိုင်ဒီဆွဲယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
+ အဘယ်သို့ငါ Youtube ကိုကနေပုံတစ်ပုံကိုကော်ပီကူးပါသနည်း
youtube ကမှသင်၏ဗီဒီယိုအိုင်ဒီ Get နှင့်အထက် textbox သို့ paste, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ❝YouTube ကို Thumbnail Get❞.
+ ခိုင်လုံသော Youtube ကိုဗီဒီယို URL ကဘာလဲ?
+ ဒေါင်းလုပ် thumbnail ကို 1080p လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Youtube ကိုဗီဒီယိုကပုံငယ်များအများဆုံး resolution ကို 1280x720 ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျ image ကိုရဖို့မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ် key ကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုရပါမည်။
စာနယ်ဇင်းများ Alt + Print Screen.
တချို့ကမော်ဒယ်များပုံနှိပ်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်သပ်သပ်ရပ်ရပ်မျက်နှာပြင်ကိုရေးနိုင်ပါတယ် PrtScn, Prnt Scrn, Print Scr.
Mac OS X ကိုသုံးပြီး အကယ်., စာနယ်ဇင်းများ Shift + ⌘ + 3
+ ဒီ YouTube ကို thumbnail ကိုဒေါင်းလုပ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ကြောင့်စိတ်ချရသနည်း
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဒီတော့ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးကိုဒေတာအသွားအလာ SSL ကို encrypt လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်ပါသည်။ ဒီလုံခြုံကွန်ယက်ကို protocol ကိုအတူ, သင့်ရဲ့ဒေတာကိုတတိယပါတီများအားဖြင့်လက်လှမ်းမီရာမှကာကွယ်ထားသည်။ YouTube အဆာဗာတစ်ခုတိုက်ရိုက် encrypted ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်အပြေးအမှန်တကယ် thumbnail ကိုရုပ်တုဆင်းတုများ၏ download ။
အသုံးဝင်သော tool များကို
အွန်လိုင်း Image ကိုမှ Play စ Button ကို Add
YouTube ဗီဒီယို Screenshot အွန်လိုင်း Get
Youtube ကိုဗီဒီယိုကစာတန်းထိုး Save
သင်သည်မည်သည့်က်ဘ်ဆိုက်ကနေအလျင်အမြန်ဗီဒီယိုများနှင့်အသံကို download လုပ်ပါကိုကူညီပါ (Youtube ကိုဖယ်ထုတ်)
YouTube စာရင်းသွင်းခြင်း Manager ကို
YouTube အတှကျအရောငျ Changer
Youtube ကိုများအတွက် controls
YouTube ကိုမှတ်ချက် Hide
YouTube အတှကျရေဒီယို Mode ကို
ဘယ်လို Youtube ကိုထုံးစံ thumbnail ကိုသင်ပိုမိုအမြင်များအရကူညီပေးသည်
အကောင်းဆုံးကို YouTube ကိုပုံစံငယ်များအတွက်ရှာဖွေနေပါသလား သင့်ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံ thumbnail ကိုဒီဇိုင်းများကိုဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေလိုသော? သင်သည်လက်ျာအရပ်ဌာန၌များမှာ!
စိတ်ကြိုက်ပုံစံငယ်များ Creating တစ်ခုလုံးအဖြစ်သင့်အမှတ်တံဆိပ်ခြီးမွှောရန်အကြီးအလမ်းမသာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လည်းရရှိနိုင်အပေါငျးတို့သရွေးချယ်စရာထဲကသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုရွေးချယ်ဖို့ကြည့်ရှုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမတစ်ဦးထုံးစံ thumbnail ကိုကဒါကြောင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာအတွက်အာရုံစူးစိုက်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်ပါတယ်ထက်သင့်ရဲ့ content တွေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်မဟုတ် - ဒါပေမယ့် thumbnail ကိုသင်၏အကြောက်မက်ဘွယ်သောအကြောင်းအရာများကိုသတိပြုမိလာကူညီမည်!
YouTube ကိုဗီဒီယိုများများအတွက်ဂရိတ် Thumbnails Creating
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်သင်၏ပုံငယ်များ branded နှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ခံရဖို့ချင်တယ်။ ကျွန်တော်အောက်က YouTube ကိုပုံစံငယ်များအတွင်းဖော်ထုတ်အနည်းငယ်ဘုံစရိုက်လက္ခဏာရှိပါတယ်။
အထက်ကဤစရိုက်များအပြင်, က cutouts, ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာဖုံးအတွက်ပုံတွေဖန်တီးကြောင်းကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမူလတန်းဘာသာရပ်၏အလွန်နာမည်ကြီးဒီဇိုင်းအချိန်ရှိသည်သောသူတို့အဘို့ရှေးခယျြမှု, ငွေ, ဝန်ထမ်းများ, သို့မဟုတ်ပါကပယ်ဆွဲထုတ်ဖို့လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကို YouTube ကို Thumbnails အရေးကြီးကို
YouTube အတှကျပုံရိပ်တွေဒီဇိုင်းလူမှုကွန်ယက်များအတွက်ဒီဇိုင်းဒါမှမဟုတ် web ပေါ်မှာကြော်ငြာအတွက်ပုံတွေဖန်တီးထက်အများကြီးကွာခြားသည်။ အဘယ်ကြောင့်? သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုအခြားတံဆိပ်များစွာနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်လို့ပဲ။
အဆိုပါ thumbnail ကိုဝေးအသုံးပြုပုံပင်မှာတိုက်ရိုက်ရှာနေစရာမလိုဘဲအရှိဆုံးအာရုံကိုဆွဲယူသောဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးသတင်းသင်အမြဲပြန်သင့်ရဲ့စာကြည့်တိုက်အတွက်မဆိုဗီဒီယိုများသွားပါနှင့်သင့်ထုံးစံ YouTube ကိုပုံငယ်များသင်လိုချင်အတိအကျဘာဖြစ်ထွက်လှည့်ဘဲနေလျှင်အနာဂတ်ကာလအတွက်ပုံငယ်များကို update နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ရိုးရှင်းသော Thumbnails နှင့်အတူအပိုဆောင်းအမှတ်တံဆိပ်
အားလုံးကတော့အမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့ YouTube ကို thumbnail ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အတူဖန်တီးမှုရဖို့သူတို့ရဲ့လမ်းထဲကသွားပါ။ တကယ်တော့, ချန်နယ်များအများစုမှာအားလုံးဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး - သူတို့ပင်မှတ်မိလွယ်တဲ့ thumbnail ကို select လုပ်မရခဲ့ပေ။
သင်၏ YouTube Thumbnail Designs Creating
စဉ်းစားရန်အခြားအရာတစ်ခုခုသည်သင်၏ဒီဇိုင်းများ၏ scaleability ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်သင်ရုံနောက်ခံ, စာသားနှင့်အရောင်များထွက်ပြောင်းလဲနေတဲ့သို့မဟုတ်သင်အသစ်များကိုဒီဇိုင်းများကိုဖန်တီးရန်တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သရုပ်ဖော်လိုအပ်မယ့်ဒီဇိုင်းကိုလိုက်မည်လိုအပ်သည်ထက်ပိုသော templated သောဒီဇိုင်းကိုလိုက်ကြလိမ့်မည်နည်း
အဆိုပါ NBA ဒီဇိုင်းများမျိုးပွားရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်း templated ဒီဇိုင်းများ၏စံနမူနာကောငျးဖြစ်ကြသည်။ အခြေခံဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူမည်သူမဆိုအလွယ်တကူအဆင့်မြှင့်အကြောင်းအရာနှင့်အတူသစ်ကိုတင်းပလိတ်များဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကိုယ်ပိုင် YouTube ကို thumbnail ကိုအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒါဟာတကယ်ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျကို Photoshop သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိလျှင်သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဗီဒီယိုများအတွက်ဗိုင်းရပ်စ် thumbnail ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်သင်မည်သည့်အွန်လိုင်း YouTube ကို thumbnail ကိုထုတ်လုပ်သူနဲ့ Photoshop template ကိုသုံးနိုင်သည်။
image ကိုလည်း embedded ကစားသမားအတွက် preview ကိုပုံရိပ်အဖြစ်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်အဖြစ်သင့်ထုံးစံ thumbnail ကိုပုံရိပ်, တတ်နိုင်သမျှကြီးမားသောဖြစ်သင့်သည်။ (640 pixels ကို၏နိမ့်ဆုံးအကျယ်နှင့်အတူ) 1280x720 ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော JPG, GIF, BMP သို့မဟုတ် PNG အဖြစ်ပုံရိပ်ကို formats များတွင်တင်ထားသောလိမ့်မည်။
Youtube ကိုအပေါ်ကိုပိုပြီးဝင်ငွေ 10 နည်းလမ်းများ
သူတို့ထံမှပိုပြီးအမြင်နှင့်ဒေါ်လာရရန်သင့် YouTube ဗီဒီယိုများကိုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ကူညီရန်ဤရိုးရှင်းသော 10 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပွိုင့်ကိုလိုက်နာပါ။
⓵ သငျသညျပိုင်ဆိုင် Youtube ကိုရုပ်သံလိုင်းမှဆက်စပ်ခြင်းမရှိသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို upload တင်ပေးရန်သင်၏အချိန်မဖြုန်းတီးပါနဲ့။
⓶ YouTube ကိုက upload တင်ပြီးတော့သင်ကခေါင်းစဉ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုကိုအမည်ပြောင်း။ သင့်ရဲ့ဗီဒီယိုအတွက် 300 စကားလုံးများကို၏မှတ်မိလွယ်တဲ့ဖော်ပြချက်ရေးသားဖော်ပြချက်များလိုင်း၌သင်တို့၏ခေါင်းစဉ် paste ။
⓷ က tags များအတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့သင့်ဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်ကို paste ။ အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့ချန်နယ်အမည်တစ်ခု tag ကိုအဖြစ်အသုံးပြုပါ။ ဒါဟာအကြံပြု၌သင်တို့၏ရုပ်သံလိုင်းဗီဒီယိုများပြသရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာတွင်ဗီဒီယို tags များထည့်သွင်းဖို့မမေ့မလြော့ပါသော်လည်းသင် tag ကိုကဲ့သို့သူတို့ကိုအသုံးမပြုခင်ဖော်ပြချက်မှာသူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ရှိရမည်ကူညီပေးသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်က spam အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
⓸ သင့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုများလင့်များ Add နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာစာမျက်နှာများဖော်ပြချက်ထဲတွင်လင့်ထားသည်။ hashtag နှင့်အတူ Twitter သို့မဟုတ် Instagram ကိုအပေါ်ဝေမျှမယ်ဗီဒီယိုနှင့်လည်းယိ tag ကိုတဦးကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။
⓹ ယိတွစ်တာ tags များသုံးပြီးအားဖြင့်သင့်နယ်ပယ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုရှာပါနှင့်အတူတူပင်ယိ tag နဲ့သင့်ချန်နယ်နှင့်ရှယ်ယာသူတို့ကို upload ။ ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်ဗီဒီယိုများဗိုင်းရပ်စ်ဝင်နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်လျှင်သင်ကျိန်းသေပဲ YouTube ဗီဒီယိုတင်ခြင်းမှ ပို. ပို. ဝင်ငွေသွားကြသည်ကိုပိုမိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် tag နဲ့ဘလော့ဂါ, Reddit, Tumblr သည်, Pinterest, Google Plus နှင့် Facebook ပေါ်တွင်မျှဝေပါ။
⓺ သင့်ရဲ့နယ်ပယ်နဲ့ရိုးရိုးလုပ်နှင့်ဆက်စပ်သောဂူဂဲလ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကနေယိကဗီဒီယိုပေါ်မှာဗွီဒီယိုတစ်ခုရှာပါနှင့်သင့်ရုပ်သံလိုင်းက upload တင်။ ဒီနည်းလမ်းကသင့်ကိုဗီဒီယိုလူမှုရေးဗိုင်းရပ်စ်ရရှိရန်ပိုမိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုလုပ်နေပါတယ်။
⓻ သငျသညျ Affiliate စျေးကွက်အကြောင်းကိုသိလျှင်ထို့နောက်သူကသင့်ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းကနေပိုပြီးဒေါ်လာရရန်သင့်အားကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့နယ်ပယ်မှဆက်စပ်နေတဲ့ညာဘက်ထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ပါကအပေါ်တစ်ဦးဖမ်းဗီဒီယိုကိုလုပ်သူက upload တင်။ တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ခြင်းငှါသူ / သူမ၏ခံစားချက်ကိုဖန်ဆင်းလျှင်သူ / သူမဝယ်ရန်သင့် link ကိုလိုကျနာနိုငျအောငျဖျောပွခကျြ၏ပထမဦးဆုံးလိုင်း၌သင်တို့၏ Affiliate link ကို paste များကိုအပ်လုဒ်ပြီးနောက်။ ဒီတော့ Affiliate တကယ်ကပိုဝင်ငွေရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
⓼ အရည်အသွေးကိုမဟုတ်အရေအတွက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသော CPC သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့အကြံပြုချက်ကိုကျိန်းသေ YouTube ကနေ ပို. ပို. ဝင်ငွေမှသငျ့ကိုကူညီမယ့်အရာကိုသင့်ချန်နယ်အမြင်များမြှင့်တင်ရန်လိုက်နာပါ။
⓽ ကောင်းသော CPC မှုနှုန်းရှိသည်နှင့်မြင့်မားသော CPC keyword ကိုရှာတွေ့မှပရီမီယံနိုင်ငံများကပစ်မှတ်ထား။
⓾ လူများကစိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရသောကြောင့်သင့်ဗီဒီယိုအတွက်မိမိစိတ်ကြိုက် Youtube ကို thumbnail ကို image ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သငျသညျထုံးစံ YouTube ကို thumbnail ကိုလုပ်ပုံကိုသိမထားဘူးဆိုရင်ပြီးနောက်သင်ရိုးရှင်းစွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနှင့်သင့်ဗီဒီယိုဆက်စပ်နေသောသူတို့အားဗီဒီယိုများကနေကူးယူနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ thumbnail ကိုအမြဲလူတွေအာရုံစိုက်မှုဖမ်းခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုရန်သူတို့ကိုအတင်း။ ဒါကြောင့်စိတ်ကိုထား။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. အဘို့အ Thank you!
အခမဲ့အားလုံးအရည်အသွေး youtube ကနှင့် Vimeo ကဗီဒီယို thumbnail ကိုရုပ်ပုံများကို save လုပ်ပါ။ ဤလျှောက်လွှာကိုသင်တို့ရှိသမျှသည်အရည်အသွေးပုံငယ်များဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါစေ။ ကိုယ့်အောက်က input ကိုအတွက် thumbnail ကိုဗီဒီယို URL ကို paste နှင့် Thumbnail ပုံရိပ် Get ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အကောင်းဆုံး YouTube ကို Thumbnail Grabber - Youtube ကိုဗီဒီယို Thumbnails Save
Full HD ကို (1080) ခုနှစ်, HD ကို (720), SD ကများနှင့်လည်းသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားအခမဲ့ youtube ကဗီဒီယိုတွေကို thumbnail ကို image ကို download လုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်လက်ရှိပုံစံများကိုထောက်ပံ့မယ့်: YouTube (HD, HQ, 1080p, 4K)
မူပိုင် © 2019
သင့်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုပြရန်နှင့်ဤ website ကိုမျှဝေပါ:
ငါသည်ငါ့လာမည့်စီမံကိနျးအတှကျ splash screen ဖန်တီးရန်ဤ thumbnail ကို Downloader ကိုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်းခြုံငုံငါ့ကိုအချိန်နာရီနဲ့ save ဿုံအလုပ်လုပ်တယ်သွားထိုသို့သောအချိန်ချွေတာ။
အကွောငျး TOS ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ Sitemap Facebook